Summer lolwandle iholidi iyona ifomu eyinhloko ukuzijabulisa nezivakashi, futhi abantu balapha zokungcebeleka ezingasogwini. I intandokazi kwabaningi famous beach emzini Sochi "Albatross", kuze kube muva nje, yayidumile kuphela phakathi Sochi abahlali, kodwa kancane kancane waqala ukuthuthukisa kanye nezivakashi.
Ngakolunye uhlangothi, lokhu kuye kwaholela yini abantu abaningi manje lapha kunalokhu elaliyikho eminyakeni ethi ayibe yishumi edlule. Kodwa ngakolunye uhlangothi, ukuthandwa elikhulayo ebhishi uyokhonza nokuthuthukiswa kwengqalasizinda yayo. Lokhu kusho ukuthi manje kukhona ukhululekile okuningi ukuze baphumule.
I amahle kakhulu futhi edume Black Sea emzini Sochi Beach "Albatros" itholakala esifundeni, okuthiwa i-New Sochi, okuyinto Yiqiniso, izivakashi Asisho kakhulu. eyingqopha Better eyaziwa - kulesi sibhedlela "Russia", okuyinto has siqu lolwandle yayo encane, eseduze "Albatross". umnyango Landelayo kukhona sibhedlela "Belarus". Uma sibheka ogwini kumephu edolobheni, umhlahlandlela kufanele kube ezitaladini ezimbili - Polytechnique kanye bamboo endaweni futhi lapho kutholakala indawo Sochi lolwandle "Albatross". Sekuyisikhathi eside bendawo akamkhethanga ucezu ugu ukuthi kusukela ingqalasizinda ezisemadolobheni ivikela eqeleni sasivumela emaweni. Mhlawumbe yilesi freak bemvelo isikhathi eside ngiqaphile ngakubo leli bhishi kusukela kwatheleka mass zezivakashi, okuyinto ngo Sochi amashumi ezinkulungwane ehlobo.
ukufinyelela esingesihle - lokhu cishe ethile eyinhloko lapho okwamanje ngisho hhayi kakhulu aminyene lolwandle "Albatross" isiqongo isizini. Sochi inenethiwekhi ezokuthutha athuthukile, ngakho bonke abaqinisekayo ukuze ngifinyelele kuleli lolwandle kumelwe ngiqhubeke shuttles №№ 4 noma 7 ukuze "Rus" sibhedlela. Izinkombandlela singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela epaki amanzi "Mayak" futhi epaki "Riviera" usuka kuyo "Albatross" kuba imizuzu 12 axoshe. Okulandelayo udinga ukuhamba emgaqweni emaweni, kodwa ziyabuya kangakanani ukugibela. Le ngxenye lokugcina indlela eya ebhishi nakanjani kubangele izinkinga kwasebekhulile, bonke abanezinkinga ngezinyawo zabo, omama nezinsana ezincane. Khona-ke basisize abashayeli bamatekisi, kusukela ekuseni kuze kube ukuvala ebhishi emsebenzini ekuqaleni ekwehleleni. amasevisi abo abiza ruble 100.
Abashayeli angaya phansi ebhishi emshinini wakho siqu. Early izikhala ekuseni yokupaka Usekhona. Enye ukuya ebhishi iwukuba zidlule kulesi sibhedlela "Russia". Ukungena okumele ikhokhwe, kodwa ukuhamba phansi onqenqemeni kwamanzi, ungakwazi phakamisa.
ukufinyelela Akukhona nje kunzima, kodwa futhi nezinye izimfanelo lolwandle "Albatross" ngo Sochi. Photo kukhombisa ngokusobala ukuthi anesihlabathi. Nokho, lapha esihlabathini grey, ngoba kusekelwe izinsalela rocks mlilo. Itshana lapha, futhi, kuziwa yonkana, kodwa yayo kancane.
lolwandle obuphelele - kuze kufinyelele ngamamitha 200 ububanzi - hhayi ngaphansi kuka-20 futhi engekho ngaphezulu kuka-30 metres. Ocean coast kule ndawo has a obala okusezingeni eliphezulu namanzi ezolile. Amagagasi nazi ezingavamile, njengoba zazakhiwe ezivimba. Ukushona kwelanga e kolwandle iphephile ngempela, ngaphandle amatshe, kodwa ukujula iqala ngo amamitha 4-6 nje kusukela ogwini, ngakho izingane, abazali kufanele babheke. Ngezinye izinsuku, ukuze emaphethelweni kwamanzi abethelwe ulwelwe, kodwa ikakhulu ogwini uhlanzekile. Vula lolwandle-8 ekuseni, uvala at 8 ntambama, emnyango ngesikhathi khulula.
The yokungcebeleka akuyona kuphela isimo, kodwa futhi okubalulekile semhlaba Sochi. Beach "Albatross" encane, kodwa futhi uzama ukwandisa inethiwekhi services, ukuze uhambisane ezingeni ehloniphekile. Manje lapha yakhiwe a kumakhabheni ezimbalwa ukuthi ushintshe izingubo, kukhona umphefumulo khulula, lapho ungakwazi ukususa off the okunosawoti amanzi olwandle futhi isihlabathi. Izivakashi uphiwa imali ukusebenzisa sunbeds nezambulela. Intengo iqashwe akuyona njalo, futhi kuba akaziwa ukuthi kuzoba ngonyaka 2017. Labo ungafuni ukuchitha imali eyengeziwe, kungenziwa esisogwini amathawula zabo, akekho lokhu akusho wamthethisa. Ukuze kube lula izivakashi eduze lolwandle (ekhuphuka entabeni akudingekile) ivuliwe a izitolo ezimbalwa ne beach izesekeli, nezitebele zamahhashi, amathilomu kanye amakamelo ngisho edla, lapho ungakwazi ukuthenga iziphuzo, ukudla okulula, ice cream.
On the "Albatross" has nokuzijabulisa ezenza ezihlukahlukene fun okuyisidina lolwandle iholide. Lapha ungakwazi ukugibela phezu "banana", "ithebhulethi", jet ski, ngena off pier.
Beach "Albatross" (Sochi), ukubuyekezwa
Izivakashi bendawo, abazi ngalokhu yogu, uncamela ukuphumula lapha. Izinzuzo ebhishi:
- nosimende ulwelwesi, izingane nethuba ukudlala ngomdlandla;
- ukuhlanzeka ephakeme kunakwezinye amabhishi yedolobha;
- kuqhathaniswa thinly populated, ngisho isizini uhlale penny khulula;
- kukhona izitolo nezindawo zokudlela ezinhle lapho nawe ungadla;
- khona izihlambi ku okukhiphayo kusuka ebhishi, okuyinto ngempela esilungele ukugeza isihlabathi ezinyaweni zabo.
- kokwehla esesabekayo;
- ukujula iqala eduze onqenqemeni kwamanzi;
- Amanzi eqolo tekutsengisa Izitolo lolwandle, ngakho-ke kuhle ukumkhumula nawe.
Labrador Club iforamu esitolo
Inhlangano - uhlelo yokufakelwa
Rhodes ngo-September: sezulu nokuzijabulisa